हल्लैहल्लाको भरमा गुमेको इज्जतको भर्पाई कसले गर्ने ?
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडाैं, २६ असार
केही महिनाअघिदेखि काठमाडौंमा कपोकल्पित सिरिन्ज आक्रमणको हल्ला चल्यो । त्यो सिरिन्ज कुनै गम्भीर रोगीले रोग सार्नकै लागि नियोजित रुपमा आक्रमण गरेको भन्नेसमेत शंका गरियो । यस्तै समाचार विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाले प्राथमिकतासहित लेखे । यसपछि प्रहरीमाथि सिरिन्ज आक्रमणकारी पक्राउ गर्न चातर्फी दबाब पर्यो ।
उपत्यका आसपासका जिल्लामा समेत सिरिन्ज आक्रमण भएको समाचार प्रकाशन भए । काठमाडौंबाट सुरु भएको सिरिन्ज आक्रमणको शृंखला बनेपा र धनुषासम्म पुग्यो । काठमाडौंमा चार जना युवतीमाथि सिरिन्ज आक्रमण भएको थियो ।
यसरी नै बनेपामा १२ असारमा ३४ वर्षीय एक महिलामाथि साझ ८ बजे सिरिन्ज आक्रमण भयो । त्यस्तै, १९ असारमा धनुषाको ठिल्लास्थित विद्यालय जाँदै गर्दा स्थानीय शिक्षक मदनमणि अधिकारीमाथि भारतीय नम्बर प्लेटमा आएका नागरिकले सिरिन्ज आक्रमण गरेको खबर आयो ।
काठमाडौंमा युवतीमाथि सिरिन्ज आक्रमण गर्ने युवा भने पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रामेछापका सन्तोष कार्की छन् । उनलाई महानगरीय अपराध महाखाशा र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले १३ असारमा महाराजगन्जबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार आफूले रोग सार्ने उद्देश्यले नभई काटीले युवतीलाई रमाइलोका लागि आक्रमण गरेको बयान दिएका छन् । प्रहरीले भने उनीमाथि समाजमा त्रास फैलाएको अभियोगमा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी हाल प्रहरी थुनामै छन् ।
सिरिन्ज आक्रमणको शृंखला भने अझै रोकिएको छैन । सोमबार मात्रै बनेपामा एक युवतीले आफूमाथि सिरिन्ज आक्रमण भएको भन्दै हल्ला फैलाइन् । ती महिला सार्वजनिक यातायातमा यात्रारत थिइन् । उनले आफू नजिकैका पुरुषले आफूमाथि सिरिन्ज आक्रमण गरेको आरोप लगाइन् ।
बसभित्र हल्ला फैलियो । स्थानीय र बसमा सवार यात्रुले ती आरोपित भनिएका युवकमाथि हातपात गरे । उनको ज्यान धन्न जोगियो ।
तत्कालै घटनास्थलमा प्रहरी पुग्यो । आरोपित युवक स्याङ्जाका खगेन्द्रप्रसाद पाठक थिए । उनी स्याङ्जाकै सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकसमेत हुन् । बिरामी भेट्न उनी बनेपा हुँदै धलिखेल जाँदै थिए ।
उनले सार्वजनिक बसमा कुनै पनि किसिमको अभद्र व्यवहार महिलामाथि गरेका थिएनन् । महिलाले आरोप लगाएकै भरमा खगेन्द्रमाथि आक्रमण भयो । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न मिडियामा समेत सिरिन्ज आक्रमण गर्ने युवा पक्राउ भएको समाचार ‘भाइरल’ भयो । उनी सिरिन्ज आक्रमणकारी नै हुन भनेर उनको फोटोसमेत सार्वजनिक भयो ।
तर, प्रहरीले खगेन्द्रमाथि आरोप लगाउने महिलामाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको र सिरिन्ज आक्रमणसमेत नभएको भन्दै प्रहरीले उनलाई मंलगबार रिहा गरेको छ ।
अपमानको क्षति कसले गर्ने ?
यसरी हल्लाकै भरमा खगेन्द्रप्रसाद पाठकको एकाएक सामाजिक रुपमै अपमान गरियो । सायद, उनकै शिष्यले समेत कस्तो शिक्षकले हामीलाई पढाउँदा रहेछन् भने होलान् ।
खगेन्द्र पाठक भने आफूमाथि लागेको आरोपबारे प्रस्टीकरण दिँदा घाँटी नै सुकेको बताउँछन् । ‘यसबारे कति पनि बोल्न मन नै छैन,’ खगेन्द्रले भने । उनी पछिल्लो समय अनावश्यक आरोप र सामाजिक सञ्जालको हल्लाकै कारण बदमान भएका एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।
भीडको लहड र हल्लैहल्लामा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा पछिल्लो समय निर्दोष व्यक्तिको इज्जत र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउने गरेको छ । गत साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या प्रकणरमा समेत यस्तै हल्लाका कारण निर्दोष व्यक्तिमाथि लाञ्छाना लाग्यो ।
निर्मला प्रकणमा हल्लैहल्लाको भरमा बर्खास्तमा परेका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) डिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्ट र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुस विष्टको नाम मुछियो । तर, आयुस र किरणसमेत एक अर्कामा परिचित थिएनन् । उनीहरूले मिलेर निर्मलाको बल्लकार पछि हत्या गरेको र सहयोगीका रूपमा बबिता बम र रोशनी बमको नामसमेत जोडियो । आयुस र किरणको डीएनएसमेत टेस्ट गरियो । निर्मला पन्तको भेजिनल स्याबसँग उनीहरुको डीएनए म्याच नभएपछि उनीहरू निर्दोष सावित भएका हुन् । निर्मला हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टकै नामसमेत मुछियो । उनकाे समेत डीएनए टेस्ट गरिएकाे थियाे ।
एउटै बलात्कार घटनामा बुबाछाराकै डीएनए टेस्ट गरिनु उनीहरूमाथिकाे गम्भीर अन्याय हाे । यस्ताे टेस्ट सामाजिक मूल्यमान्यता र वैज्ञानिक रूपमै पनि अनुचित रहेकाे बताइन्छ ।
घटनामा उनको संलग्नता हुने कुरै थिएन । तर, राजनीतिक आवरणमा आन्दोलन चर्काउने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही कुलुषित मनसाय बोकेका व्यक्तिका कारण निर्दोष व्यक्तिमाथि अनाहकमा लगाइएको आरोपका कारण अहिले उनीहरूमाथि समाजले हेर्ने नजर नै फरक भएको छ । अर्को कुरा घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीसमेत त्यसैको पछि लाग्दा आरोपकै भरमा पक्राउ गर्दा लाग्ने अपमान निर्दोषमाथि पथ पीडाबोध हुने गरेको छ ।
भनिन्छ, ‘१० जना अपराधी छुटून् तर एक जना निर्दोष नफसून्,’ तर पछिल्लो समयका केही घटनाले अपराधी पक्राउ हुनुभन्दा निर्दोषमाथि लाग्ने आरोप भयावह छ ।
निर्मला हत्या अभियोगमा जबर्जस्त आरोपित बनाइएका बबिता र रोशनीले केही दिनअघिसम्म कञ्चनपुरमा बस्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै, एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा, मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुसलगायतको इज्जतमा समेत गम्भीर चोट परेको छ । उनीहरुमाथि समाजले हेर्ने दृष्टिनै अहिले फकर छ । यसरी निर्दोष माथि जवरजस्त लगाइएको आरोपले परेको इज्जतमाथिको दागको भरपाई कसरी हुन्छ ? कसले दिन्छ ? यो गम्भीर र सोचनीय विषय भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६, ०२:०७:००
कालापानीमा भारतको मध्ययुगीन अहंकार
विवादित सीमा अध्ययन अब नेपाली सेनाले गर्ने
कैदी शम्भु भारतीलाई होटेल पुर्‍याउने असई निलम्बित
लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कहिल्यै पुगेनन् सुरक्षाकर्मी
जेलभित्रका २ सांसदः शपथ खाने र खुवाउने एकै ठाउँ
'१७२ ठाउँमा १५ लाख रोपनी नेपाली भूमि भारतले मिचेकाे छ'